राष्ट्रपति चुनावमा रुसले देखाएको चासोबारे आगामी साता खुलासा गरिने -
राष्ट्रपति चुनावमा रुसले देखाएको चासोबारे आगामी साता खुलासा गरिने
वासिंटान, २२ पुस ।
अमेरिकी गुप्तचर विभागका प्रमुख जनरल जेम्स क्लेपरले रुसले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा दिएको चासोबारे खुलासा गर्ने बताएका छन् ।
अमेरिकी चुनावका बेला भएको भनिएको रुसी हस्तक्षेपका बारेमा क्लेपरले राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले डेमोक्रेटिक पार्टीका ईमेल लिक गर्न आदेश दिएको र यसका पछाडिको उद्देश्य आगामी हप्ता खुलासा गर्ने बताए ।
यसअघि उनले रुसी ह्याकिङका बारेमा केही बताएका थिएनन् । सिनेटको सैन्य समितिले यसबारेमा सुनुवाई गरिरहेको छ । यसको नेतृत्व रिपब्लिकन सिनेटर जोन मेक्केनले गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले रुसका ३५ जना कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरिसकेको छ । गुप्तचर विभाग प्रमुख क्लेपरले रुसले अमेरिकामा विभिन्न भ्रम, गलत सूचना र झुठो खबर फैलाएको बताएका छन् । (एजेन्सी)
उ वेला छोरीहरु स्कुल जाने चलन थिएन । छोरालाई जन्मे देखि नै मिठो, मसिनो,पोसिलो दुध दहि घ्यू दिने च... विस्तृतमा
यो तिम्रो मनको गीत र मेरो मनको गीत साथी गाऊँ सँगसँगै ! त्यो तिमी पुग्ने ठाउँ र म नि पुग्... विस्तृतमा
राजनैतिक निबृतीभरणका रूपमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले सेवा... विस्तृतमा
अहिलेकाे ब्यबस्था के हाे? देश प्रजातन्त्र,गणतन्त्र लोकतन्त्र हुखै लुटतन्त्रमा गयाे... विस्तृतमा
कुनै पनि देशले विदेशीलाई भन्दा स्वदेशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ भने हामीले त्यसको खण्डन गर्नु अाप... विस्तृतमा